Afganistan oo loo yeelay taliye cusub - BBC Somali - Warar
Afganistan oo loo yeelay taliye cusub
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 10 Febraayo, 2013, 11:34 GMT 14:34 SGA
Jeneral John Allen oo xilka wareejiyay maanta ayaa sheegay in markii ay ciidamada ka baxaan Afganistan in ciidamada qaar ay ku hari doonaan Afganistaan.
Jeneraalka Maraykanka Joseph Dunford, ayaa kala wareegay xilka ciidamada Nato ee Afganistaan taliye John Allen munaasabad lagu qabtay magaalada Kabul dibadeeda.
Jeneral Dunford, wuxuu masuul ka noqon doonaa ciidamada Maraykanka markay ka baxayaan Afganistaan. Markuu xilka wareejinayay ayuu BBC u sheegay in ciidamada isbahaysiga ay ku guulaysanayaan dagaalka ay kula jiraan Talibaan.
Jeneral Joseph Dunford ayaa maanta xilka Nato la wareegay.
Ciidamada Afganistan ayaa hadda hogaamiya howlgalo waawayn, laakiin Jeneral Allen ayaa sheegay in Nato ay u baahan tahay dulqaad iyo inay caawiyaan ciidamada Afganistaan.